C/Raxmaan Faroole oo Ciidamo gaar ah la yimid Muqdisho iyo Layaabkii shalay ay sameeyeen! | kowtharmedia.com
Home WARAR C/Raxmaan Faroole oo Ciidamo gaar ah la yimid Muqdisho iyo Layaabkii shalay ay sameeyeen!
C/Raxmaan Faroole oo Ciidamo gaar ah la yimid Muqdisho iyo Layaabkii shalay ay sameeyeen!
Jan 23, 2017WARAR
Waa arin uu kaga duwan yahay musharaxiinta kale ee aan Muqdisho kasoo jeedin kuwaas oo aan muujin kala qob qob amniga caasimada.
Gunaanadkii Faroole wuxuu wax ka og yahay Dagaalka dheeraaday oo kajira Dhulka Hawiyeha qasatan Labada Shabeele iyo Muqdisho + Bay iyo Bakaal ilaa iyo Kismaayo oo aay Joogaan Ciidan Afrikaan uu awelkeeda ee Soomaaaliya usoo Hogaamiyay mid Faroole ee wadda Shaqayn jireen ´kaas oo ahaa Cabdullaaah Yuusuf oo markii Danbe ku geeriyoooday Yaman waxii markaas ka danbeeyay Qaybo ka mid ah Dalka Soomaaliya waxaa loo gacan galiyay in yar oo ah Hogaamiyo Koooxdiin iyo Shisheeye + Dowlad Isku sheeg.
Previous PostMUUQAAL: Dad ku dhintay Duufaan Xoog badan oo ku dhufatay dalka Maraykanka (Daawo)!! Next PostKenya oo u sheegtay si jees jees ah ineysan joojineyn duulimaadyada Soomaalida ee lagu baaro Gobalka Wajeer!!